ငါ Empress ဖြစ်ချင်ကြဘူး! - Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga နှင့် Light Novel Online ကိုအခမဲ့ဖတ်ပါ
ငါ Empress ဖြစ်ချင်ပါဘူး ပျမ်းမျှ 4.2 /5ထဲက 9
N / A, 19.4K အမြင်များရှိသည်
စိတ်ကူးစိတ်ကမ်း, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း, အသက်တာ၏အချပ်
ငါ empress ဖြစ်ချင်ကြဘူး! Serena, မင်းသမီး၏သမီးဉာဏ်ရည်, အဆင့်အတန်းနှင့်အသွင်အပြင်နှင့်ပြည့်ဝ၏။ သို့သော်အမှန်တရားမှာသူမကသူမ၏အတိတ်ဘဝတွင်အနာဂတ်၌ဖြစ်ပျက်နိုင်သည့်အဖြစ်ဆိုးများကိုသတိပြုမိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာ Serena ဒီအဖြစ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်လိမ့်မည်!
အခန်းကြီး 58 မတ်လ 8, 2021
အခန်းကြီး 54 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 8, 2021
အခန်းကြီး 52 ဇန်နဝါရီလ 26, 2021
အခန်းကြီး 49 ဇန်နဝါရီလ 4, 2021
အခန်းကြီး 44 ဒီဇင်ဘာလတွင် 2, 2020
အခန်းကြီး 43 နိုဝင်ဘာလ 26, 2020
အခန်းကြီး 42 နိုဝင်ဘာလ 22, 2020
အခန်းကြီး 27 သြဂုတ်လ 3, 2020
အခန်းကြီး 26 ဇူလိုင်လ 29, 2020
အခန်းကြီး 25 ဇူလိုင်လ 22, 2020
အခန်းကြီး 22 ဇူလိုင်လ 5, 2020
အခန်းကြီး 17 မေလ 25, 2020
အခန်းကြီး 16 မေလ 19, 2020
အခန်းကြီး 15 မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး 14 မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး 13 မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး 12 မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး 11	မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး9မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး 8 မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး7မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး6မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး5မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး4မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး3မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး2မေလ 15, 2020
အခန်းကြီး 1 မေလ 15, 2020